Endrik'io pejy io tamin'ny 25 Janoary 2015 à 15:58
1 417 octets ajoutés , il y a 7 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 25 Janoary 2015 à 15:40 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 25 Janoary 2015 à 15:58 (hanova) (esory)
==== Sisimasoandro ====
==== Rahon'i Oort ====▼
==== Rahon'i Hills ====
Miankina amin'ny fifandraisany amin'ny fari-kabakabaka iraisan-kintana ny endriky ny sisimasoandro. Rehefa miala amin'ny sisimasoandro (230 AU miala amin'ny masoandro), dia ahitana [[onja dona]] izay faritra plasma avelan'ny Masoandro amin'ny diany ao amin'ny [[Lalana Mandronono]].
▲==== Rahon'i Oort ary rahon'i Hills ====
Ny rahon'i Oort dia faritra heverina fa misy zavatra mivaingana mahery ny 10<sup>18</sup> (iray miliara miliara) ary heverina fa toeram-piavian'ny kometa lava fotoana. Manomboka eo amin'ny 50 000 AU hatramin'ny 154 000 AU. Kely ny hafaingam-pihetsehan'ny zavatra ao amin'ny rahon'i Oort ary mety ho voahelingelin'ny kintana manakaiky, ny onja ara-bondron-kintana ary ny fifandonana ny fizotran'izy ireo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/702706"